စတင်သင်ယူခြင်း — MYSTERY ZILLION
August 2009 edited October 2009 in File Request
ဘာမှမသိနည်းမလည်သေးတဲ့ new လေးတစ်ယောက်ပါ။
ebook မြန်မာလိုရှိခဲ့ရင် share ပေးကြပါ။
ဘာ ebook လိုချင်တာလဲ။ နာမည်လေးတော့ တပ်ပေးပါ။
ဘာebook လိုချင်တာလဲ။ နာမည်လေးတော့ တပ်ပေးပါ။
i want to get someebook, especially in HTML and css:((. if possible some other web design training or learning software,
kyawkyar wrote: »
အဲဒီနေရာမှာ http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?t=4329&highlight=CISCO+ebooks ကျွန်တော်တင်ထားတာ နည်းနည်းရှိပါတယ် .. ရှာကြည့်လိုက်ပါ .. HTML , CSS နဲ့ web develop လုပ်တဲ့စာအုပ်တွေလည်း ပါပါတယ် .. အဲဒီက စာအုပ်တွေမကြိုက်ဘူးဆိုရင် .. အခြားဆိုဒ်တွေ ပြောပြပေးပါမယ်..
photoshop ebook လေးပါခင်ဗျာ။....
ကျွန်တော် kaspersky Antivirus 2009 ကို နက်ဝက်ဂိမ်းစက်တွေမှာ တင်ပြီး
update လုပ်ချင်လို ့ပါ . အဲဒါလေး ပြောပြကြပါဦးနော် .
key တွေလိုုမယ်ဆိုလဲ တစ်ခါထဲ ပေးကြပါနော် .
လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးလဲ သိချင်ပါတယ် ခင်ဂျာ .
ကူညီပေးကြပါ . ဟီး
ဟုတ်ကဲ့ photoshop အတွက် တော့ photoshop 7.0 စာအုပ်လေးပါ...
ဒီမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ.......အဆင်ပြေပါစေ ဗျာ
ebook တွေရှိကြရင်လညး် share ကျပါအုံး....
ဒါကတော့ ဆရာဇော်လင်း ရဲ့ Window server 2003 စာအုပ် ပါ
ဒါက တော့ ဆရာဦးဇော်လင်းရဲ့ A+ စာအုပ်လေးပါ
linux os myanmar version
[FONT=&quot] [/FONT] Windows 2003 POP3 Service အတွက်ပါ
[FONT=&quot]Window XP Toubeshooting
တင်ပေးတဲ့ သူ တွေ အားလုံး (အားလုံး) ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်...... အကုန်လုံးကိုလည်း ဒေါင်းသွားပါတယ်........ တင်ပေးသော ကျေးဇူး ရှင်များအားလုံး တစ်သားမွေးလို့ တစ်သွေးလှ နိုင်ကြပါစေ......... :d
Adobe Pagemaker 7.0 အတွက်မြန်မာပြန်စာအုပ်လေးပါ
Window Installation မလုပ်တက်သေးသူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
:68: linux server Management အကြောင်းစာအုပ်လေးပါ ..ဗျာ
တခြားအကိုအမ များလည်း စာအုပ်များရှိရင် ပြန် share ကျပါအုံးဗျာ.
အဟီး တင်ထားပေးတာ ယောက်ျားလေး တွေပဲမို့ ဒီဆုပေးလိုက်တာ....... မိန်းကလေး တွေ တင်ပြီး ဒီဆုပေးရင် ပါးရိုက်ခံရမှာပေါ့...... :d
http://mmphotoshop.net/ အဲဒီ့ဆိုဒ်လေးကိုသွားကြည့်ပါလား \_:D/:67:\_:D/
ဆရာမျိုးသူရ ရေးထားသော ကွန်ပျုတာ တက်ဆင်ပြုပြင်နည်း စာအုပ် ပါ...
ဆရာမျိုးသူရ ရေးသားထာတဲံ့ နေစဉ်သုံး အင်တာနက် စာအုပ်ပါ...
မင်္ဂလာပါဗျာကြိုဆိုပါတယ် mz ကနေ :6::6::6:
ebook တွေတင်ပေးတဲ့ MZ က ညီအကိုအားလုံးကိုကျေးဖူးတင်တယ်ဗျာ။...ရတာတွေအားလုံးကိုဒေါင်းလိုက်ပြီ...:D
404 နဲ့ တိုးနေတယ်ဗျို့။
August 2009 edited August 2009 Banned Users
ရတနာဝင်းထိန်တို့ဘာတို့ဆိုပြီးတော့တော့ မတောင်းနဲ့နော် အဲဒါတွေလိုချင်ရင် မော်ဒရေတာမောင်ပြုံးဆီမှာရှိတယ်
(ဟီး ကြုံတုန်း ဖော်ကောင်လုပ်လိုက်တာ)
i also justabeginner so teach me plz :103::103::103::103::10
မတ်ိုးပါဘူးဖရန်.ရယ်. ကိုယ်တောင် ဒေါင်းသွားသေးတယ်။ http://www.mediafire.com/?yomnnzml4qx နေပြန်ယူလိုက်နော်။
ဟီးးးးးးးးး ၇ရင်တော့လိုချင်လို်က်တာ ဂျာ တောင်လို့ရရင်တောငး်ကိုပစ်လိုက်ဦးမယ် ကိုတောင်ပြုန်း အဲ ကိုမောင်ပြုံး ဆီကို
တော့ပစ်တွေလွဲနေပြန်ပြီနော်.. photoshop အောက်မှာ ebook အတွက်ဖြစ်နေပြီ.. ကြည့်လုပ်ကြပါဦးမော်မော်မင်မင်တို့ရေ... ( (
ကျနော်လဲ 404 တိုးနေတယ်။
Mediafire ကျတော့ ကျနော့်ဆီမှာ Access Denied ... :2:
ifile.it မှာရရင် တင်ပေးကြပါဗျို့ .... :77::)
ထီထိုးဖို့...
အတိတ်စိမ်းပေးတာလား ? ဒီတပါတ် စမ်းကြည် ့လိုက်အုံးမယ် ။
53% everyday_internet.rar 28.739 MB
upload failed, please try uploading this file again later
တစ်မျိုးမထင်နဲ့နော် ရက်ပစ်ကဘဲ တင်ရတာ အဆင်ပြေတယ်
ပ၇ီမီ မယံနိုင်ပါဘူးဆိုမှ တပစ်ထဲပစ်နေကြတယ်
ပေါက်လို့ကတော့2သက်စာ၀ယ်ပစ်လိုက်မယ် ဘာမှတ်လဲ ခုကတည်းက ပြေပြေလည်ဆက်ဆံပြီးဖားထားကြ ဟဲဟဲ:39::39:
HTML A Beginners Guide လေး ထပ်တင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ
ဆရာ ဦးအေးကိုကို ရဲ့အကောင်းဆုံးကွန်ပျုတာပြုပြင်ခြင်း
password တောင်းနေတယ်......ပိလိစ်...ဆရာဦးအေးကိုရဲ့ စာအုပ်က...:39:
ဆရာမျိုးသူရရဲ့ နေ့စဉ်သုံးInternet စာအုပ်ကို ifile ကနေဒေါင်းချင်ရင်
ဆရာဇော်လင်း၏ Hardware စာအုပ်
Microsoft Excel အသုံးပြုနည်း
တေနာလေး တူဆီမှာ ဒီလောက်ရှိနေတာတောင် နာ့ဆီကို လာညှစ်နေသေးတယ်။ တော်ဘီ ပေးတော့၀ူး :d:d:d:d
password က kozin ပါ www.kozin.yolasite.com
Photoshop CS2 က
passoword တောင်းနေလို့ပါ ကူညီပါအုန်းဗျာ
ဒါလေးက E book တော့ ဟုတ်ဘူးနော်
More 350 Dummies Ebooks collection 2008 | 3320 MB
keosoft90 вЂ™s collection HDD Dummies Ebooks
3ds Studio Max5For Dummies.chm
A+ Certification 2nd Ed For Dummies.pdf
Acne For Dummies.pdf
ACT 2007 For Dummies.pdf
ACT ! 2005 For Dummies.pdf
Adobe Creative Suite2AIO Desk Reference For Dummies.pdf
Adobe Creative Suite3Web Premium AIO Desk Reference For Dummies.pdf
Adobe Creative Suite AIO Desk Reference For Dummies.chm
Adobe Suite AIO Desk Reference For Dummies.chm
Advertising 2nd Ed For Dummies.pdf
Algebra II For Dummies.PDF
Ancient Egyptians For Dummies.pdf
Anger Management For Dummies.pdf **
AP English Literature & Composition For Dummies.pdf **
Arabic For Dummies.pdf
ASP Net20 AIO Desk Reference For Dummies.pdf
ASP Net20 Everyday Apps For Dummies.pdf
ASP Net35 For Dummies Feb 2008.pdf **
Autocad & Autocad Lt AIO Desk Reference For Dummies.pdf **
Autocad 2005 For Dummies.pdf
Autocad 2007 For Dummies.pdf
Autocad 2008 3d Modeling Workbook For Dummies.pdf
Autocad 2008 For Dummies.pdf **
Bass Guitar For Dummies.pdf
BEA Weblogic Server 8 For Dummies.pdf
Beginning Java Programming For Dummies.pdf
Beginning Programming 4th Ed For Dummies.chm
Beginning Programming For Dummies.pdf
Bioinformatics For Dummies 2nd Ed.pdf
Bit Torrent For Dummies.pdf
Blackberry For Dummies 2006.pdf
Blackberry Pearl For Dummies Feb 2007.pdf
Blackboard For Dummies.pdf
Creating Web Pages 8th Ed For Dummies.pdf
Creating Web Pages AIO Desk Reference 2nd Ed For Dummies.pdf
Creating Web Pages AIO Desk Reference 3rd Ed For Dummies.pdf
Creating Web Pages For Dummies 7ed.pdf
Creating Web Pages For Dummies 8th Ed Oct 2006.pdf
Cruise Vacations 2006 Ed For Dummies.pdf
Crystal Xcelsius For Dummies.pdf
CSS Web Design For Dummies.pdf
Cutting Edge Powerpoint 2007 For Dummies.pdf
Europe For Dummies 4ed.pdf
Excel 2007 AIO Desk Reference For Dummies Jan 2007.pdf
Excel 2007 Dashboards & Reports For Dummies Mar 2008.pdf **
Excel 2007 For Dummies Dec 2006.pdf **
Excel 2007 Just The Steps For Dummies Feb 2007 Ebook-ling.pdf
Excel 2007 Vba Programming For Dummies Feb 2007.pdf
Excel 2007 Workbook For Dummies Sep 2007.pdf
Excel Timesaving Techniques For Dummies.pdf
Excel Workbook For Dummies.pdf
Expert Podcasting Practices For Dummies Dec 2007.pdf **
Home Networking 3rd Ed For Dummies.pdf
Home Networking For Dummies 4th Ed.pdf **
Horseback Riding For Dummies.pdf
HTML4For Dummies 5th Ed.pdf
Hypnotherapy For Dummies.pdf
Hacking Xbox 360 For Dummies
Internet Explorer Construction Kit For Dummies вЂ“ Wiley.pdf
Ipod & Itunes For Dummies 3rd Ed.pdf
Ipod & Itunes 2nd Ed For Dummies.pdf
ISBN-13 Special Ed For Dummies.pdf
Microsoft Office 2007 AIO Desk Reference For Dummies.pdf
Microsoft Office Excel 2007 AIO Desk Reference For Dummies.pdf
Microsoft Office Excel 2007 Data Analysis For Dummies.pdf
Microsoft Office Excel 2007 For Dummies.pdf
Microsoft Office Excel 2007 Just The Steps For Dummies.pdf
Microsoft Office Live For Dummies Jul 2007.pdf **
Microsoft Office Outlook 2007 For Dummies.pdf
Microsoft Office Project 2007 AIO Desk Reference For Dummies.pdf
Microsoft Office Project 2007 For Dummies.pdf
Microsoft Office Publisher 2007 For Dummies Dec 2007.pdf **
Microsoft Office Visio 2007 For Dummies.pdf
Microsoft Office Word 2007 For Dummies.pdf
Microsoft SQL Server 2005 Express Ed For Dummies.pdf
Microsoft SQL Server 2005 For Dummies.pdf
Microsoft SQL Server 2005 Programming For Dummies Apr 2007.pdf
Microsoft Windows Server 2003 For Dummies (2003).chm **
Mini Mac Hacks & Mods For Dummies.pdf
Music Composition For Dummies.pdf **
Myspace For Dummies.pdf
PCвЂ™s 10th Ed For Dummies.pdf **
PCвЂ™s AIO Desk Reference 2nd Ed For Dummies.pdf
PHP & MYSQL Web Development AIO Desk Reference For Dummies Jan 2008.pdf **
Physics Workbook For Dummies.pdf **
PimpinвЂ™ For Dummies.pdf
Poker For Dummies.pdf
Powerpoint 2003 Just The Steps For Dummies May 2006.pdf
Powerpoint 2007 AIO Desk Reference For Dummies Jan 2007.pdf
Powerpoint 2007 Just The Steps For Dummies Mar 2007.pdf
Public Relations For Dummies.pdf
SQL AIO Desk Reference For Dummies Jul 2007.pdf **
SQL For Dummies 2003.pdf
SQL For Dummies, 6th Ed 2006.pdf **
Starting An Online Busines For Dummies.pdf
Statistics For Dummies 2003.chm **
Strategic Planning For Dummies.pdf
Stretching For Dummies.pdf
SUSE Linux 10 For Dummies.pdf **
SUSE Linux93 For Dummies.pdf **
Tablet PCвЂ™s For Dummies.chm
Watercolor Painting For Dummies.pdf **
Web Analytics For Dummies Apr 2007.pdf
Web Design For Dummies 2nd Ed 2006.pdf
Webex Web Meetings For Dummies.pdf
Weight Training 3rd Ed For Dummies.pdf
Wikis For Dummies (2007).pdf
Windows Home Server For Dummies.pdf **
Windows Vista AIO Desk Reference For Dummies.pdf
Windows Vista For Dummies Dec 2006.pdf
Windows Vista For Dummies Quick Reference.pdf
Windows Vista Just The Steps For Dummies Dec 2006.pdf
Xbox 360 For Dummies.pdf **
စာအုပ်တွေကတော့ပေါလှချီလား ဒါပေမဲ့ rap ကဖြစ်နေတော့ ဒေါင်းရတာမလွယ်ဘူးဗျာ
MZ က စာအုပ်ချည်းပဲ မူပိုင်ခွင့်နဲ ့စုထားတာ..